Madaxweyne yaasha Soomaaliya iyo Puntland oo shir jaraaid ka qabtay Kulankoodii – SBC
Madaxweyne yaasha Soomaaliya iyo Puntland oo shir jaraaid ka qabtay Kulankoodii
Ka dibmarkii uu soo dhamaaday kulankii maanta dhexmaray madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland ayaa shir jaraaid oo ay ku qabteen gudaha madaxtooyada waxa ay ku faah faahiyeen wada hadalkoodii iyo qodobo laga soo saaray.
In wada hadalka socda loo maro dib u heshiisiinta Soomaalia.
In la sameeyo gudiyo isku dhafan oo ka shaqeeya Nabadda iyo mid ahaanshaha cududa ciidan .
In lagu dhaqmo heshiisyadii dhexmaray sanadkii hore labada dhinac waa Puntland iyo dowlada dhexe dhinac kasta dhan Amni iyo dhan dhaqaale.
ayaa ka mid ahaa qodobadii ka soo baxay kulanka labada madaxweyne ee maanta ka dhacay magaalada Garoowe.
Waxaa goobta ka jeediyay hadalo Madaxweyne yaasha Puntland iyo Soomaaliya waxaa ku horeeyay madaxweynaha Puntland Dr Faroole isagoo faah faahin ka bixiyay qodobada laga wada hadlay sheegayna in ay isku afgarteen qodobada qaar qaarna dib loo dhigay.
Waxaa uu tilmaamay Dr Faroole in dib loo dhigay ka hadalka qodobkii ku saabsanaa siyaasada maamul u sameynta gobolada dalka taas oo uu sheegay in ay dib isaga arki doonaan labada dhinac.
Sidoo kale waxa uu faah faahin ka bixiyay Madaxweynaha puntland qodobo dastuuri ah oo uu sheegay in dhanka dowlada isbedel looga sameeyay kuwaa soo uu ku tilmaamay in ay tahay in madaxda Soomaaliya ay dib u eegaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna shirka jaraaid ka sheegay in kulankii dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Puntland ay isku afgarteen qodobadii ay isla soo qaadeen, dhowaanna si rasmi ah loo dhaqan gelin doono.
Waxa uu usheegay Xasan Sheekh madaxweyne Faroole Cabashadii dhanka dastuurka ahaa ee uu ka cawday in dib la isaga arki doono ayna ka wada shaqeyn doonaan gudi farsamana loo saarayo.
Sida ka muuqatay Hadalada madaxweynaha Puntland waxaa jiray qodobo ka ku jiray ajandayaashii kulanka isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya oo aan la isku afgaran kuwaas oo ay ka mid ahaayeen shirka London ka dhicidoona dhowaan iyo hanaanka loo marayo siyaasada maamul u sameynta gobolada dalka.
Waxay qodobadani aan weli la isku afgaranin sababi karaan in Puntland ay ka baaqsato ka qeyb galka kulanka London kaas oo sida horay loo shaaciyay muhiim u ah dhinacyada Soomaalida.